Muzvare Joanna Mamombe naVaHwende Voburitswa Mutirongo
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mutongi wedare repamusoro VaDavison Foroma vakapa mumiriri weHarare West mudare reparamende vari vebato reMDC, Muzvare Joanna Mamombe, mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi weChishanu.
Nemusi weChina mutongi uyu akapawo sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaRashid Mahiya, mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Ukuwo, vanomirira Kuwadzana East mudare reparamende vari veMDC zvekare, VaCharlton Hwende, vakapihwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nemusi weChishanu.
Gweta raMuzvare Mamombe uye vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaObey Shava, vaudza Studio 7 kuti mari yechibatiso iri kuramba ichikwidzwa uye imwe mitemo inotyora kodzero dzevanhu.
“Mari dzechibatiso dziri kutaurwa idzi imari dzinovhundusa, dzinotyisa kwazvo.” VaShava vaudza Studio 7. Vanoenderera mberi vachiti, "Mutemo unotaura kuti kana mari dzechibatiso dzichitaurwa, ngakutaurwe dzinokwanisa kubhadharwa neavo vari muhusungwa nokuti nyaya haisi yekutaura mari dzavasingakwanisi kubhadhara kuti varambe vari muhusungwa.”
Pakutanga kwesvondo rino, mutauriri weMDC, VaJacob Mafume, vakaudza Studio 7 kuti nhengo dzebato ravo muparamende dzine nyaya kumatare dzave kupfuura gumi.